A Few Of Our Precious Cutie Pies..
ဦးဝင်းတင်>“တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ သမ္မတလူချောအဖွဲ့ ”
There is NO brain inside to think, never realized that they were used by the Myanmar Military Government.
ဦးသိန်းစိန်တို့ ၂၀၁၅ အတွက် ကြိုမဲဆွယ်နေ…အမြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရသူတွေကတော့ခံလို့ခံရမှန်း မသိ
Dear Myanmar people and monks, please do not let yourself to be used by military dictators
For Lesen L...How To Put Pictures In The Blog.
THE president of the newly- formed Zoo Operators, Breeders,
Wildlife Entrepreneurs and Animal Hobbyists Association cautioned in an
earlier statement that if zoo guidelines were not rescinded, more zoos
would face closure.
Posted: 16 Oct 2012 05:01 AM PDT
Katanya lagi, perbuatan itu adalah satu budaya bagi melambangkan persediaan untuk 'bergaduh'.
"Sebagai wanita Melayu, terutamanya saya dari Pulau Pinang, itu cara kita (Melayu) kalau dah nak marah.
"Itu menunjukkan jika mereka bersedia bergaduh, saya juga bersedia," katanya.
Sejurus rakaman itu memaparkan Shahrizat menuduh Rafizi sebagai 'si Tanggang', Ranjit menyoal adakah ia ditujukan kepada anak guamnya, Rafizi yang mendapat biasiswa daripada Petronas.
"Saya bukan cakap terus kepada defenden satu, tapi nama Hafizi, Hafizi itu ada di seluruh dunia.
"Saya mengambil contoh si Tanggang kerana saya melihat generasi ini sebagai ibu akan beri nasihat kepada anaknya. Si Tanggang saya nampak apa yang defendan satu (Rafizi) buat," ujarnya.
"Apa relevannya tanya isu si Tanggang kerana ia merupakan cerita Melayu lama-lama," tempelak beliau.
1. What are the Selangor State Government's intentions in the restructuring of the water industry in Selangor? o The Selangor State Government intends to restructure the water services industry in Selangor inaholistic manner, ensuring that the four concession companies are consolidated into one entity, which would eventually hold the operating license to manage the water treatment and
Posted: 16 Oct 2012 03:06 AM PDT
"Saya kini sering menggeletar di bahagian tangan dan jantung sering sakit terutamanya apabila cuaca sejuk.
"Saya masih trauma dengan insiden ini hinggakan setiap kali terlihat kereta peronda saya akan teringat peristiwa tiga tahun lalu itu," kata Norizan.
"Mereka (polis) bukan sahaja tidak melawat malahan mengambil sikap lepas tangan. Hishammuddin pun sama, mana janjinya untuk memberikan keadilan anak saya ini? "Sudah hampir tiga tahun, pelbagai janji yang dibuat hingga kini belum ditunaikan. Kini anak saya kena tanggung perubatan sendiri, hospital sudah menghantar surat ke rumah untuk menuntut pembayaran," kata Siti Alimah.
"Saya cabar kerajaan dan polis untuk bertanggungjawab ke atas cubaan membunuh. Ini adalah cubaan membunuh.Saya mahu mereka bertanggungjawab!" kata Surendran.
Posted: 16 Oct 2012 06:24 AM PDT
Eva and her son Merlin admiring the burung tiong perched on the clothes hanger.
Momo relaxing at the corner of the staircase.
Libby's pose..for Fateen..we know you rindu her so much!
Eva lagi interested in the birdie more than the biscuits!
Lady Yoda mengelamun rindu kat Banun..:)
Simba's favourite siesta spot..Simba abang Merlin
"တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ သမ္မတလူချောအဖွဲ့ " (ဦးဝင်းတင်)
ဘာတဲ့။ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က နောက်တစ်ဆက်ဆိုလား။နောက်တစ်သက်ဆိုလား သမ္မတလုပ်ဦးမှာဆို။ ဟုတ်လား။ ဖြစ်ရပြန်ပြီတစ်မျိုး။ဟိုတစ်ခါ ပြောသံကြားခဲ့ရတာကတော့ တစ်သက်တမ်းကျွတ်ရင် "ဂွတ်ဘိုင်" ပြီဆို။ ဘာတွေလဲဗျာ။ ရာဇပလ္လင်မှ တင်မနွေးသေးဘူး။ နောက်တစ်ရေးကုလားထိုင်စကား ပြောလာကြပြန်ပလား။
သမ္မတလူချောအဖွဲ့ ကတော့ ပေါ်ပြူလာသမ္မတကြီး၊ လူထုအသည်းကျော်သမ္မတကြီး၊ ဖေးဘရိတ်သ
မ္မတကြီးဆိုတဲ့ ကရောင်းရိုက်သံ၊ ဗိန်းမောင်းတိုက်သံပေးနေကြမှာပေါ့။ သတင်းတွေ တေး၊ သတင်းတွေ မွေး၊ သတင်းတွေ ကျွေး၊သတင်းတွေ နွှေး၊ သတင်းတွေ ပေးနေကြမှာပေါ့။ အဲဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာချောဆွဲခိုင်းတာမျိုးတွေ ရှိဆိုလား။ အငှားလိုက်ခိုင်းတာမျိုးတွေ ရှိဆိုလား။
သမ္မတ၀ိုင်းတော်သားတွေက ခြေအလှုပ်သား။ ခြေလှုပ်တယ်ဆိုတာခြေများတာ ပြောတာပါ။ ခြေများတယ်ဆိုတာကလည်း အကွက်များတာပြောတာပါ။ အကွက်များတယ်ဆိုတာလည်း အလှည့်များတယ် ပြောတာပါ။ဟောကွယ် ပြောရင်းဖြေရင်း ရှုပ်ကုန်ပြီ။ အေးလေ။ လုပ်တာတွေ မရှင်းတော့ပြောတာဖြေတာတွေလည်း ရှုပ်ကုန်တော့တာပေါ့။ ဟာ.. ဒီလိုလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျုပ်ဆိုလိုတာက သမ္မတလူချောအဖွဲ့ က အာချောင်ချောင်။အဲ.. ဟုတ်ပါဘူး။ အာသွက်သွက်၊ လျှာသွက်သွက် ချက်ချက်ချာချာ ယန္တယားလူတွေမဟုတ်လား။ စက်ပစ္စည်းတွေလို လည်တာပတ်တာပေါ့။ ပြည်တော်ပြန်တွေကိစ္စလည်း သူတို့ ဘဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စလည်း သူတို့ ဘဲ။ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိစ္စလည်း သူတို့ ဘဲ။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စလည်းသူတို့ ဘဲ။ တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဲဗျာ။
အာဏာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူဆိုတဲ့ အာဏာအေးဂျင့်တွေ၊အာဏာကြိုးကိုင်တွေ၊ အာဏာဒရ၀မ်တွေကသာ သမ္မတဆိုတဲ့ နိုင်ငံ့ဦးသျှောင်ကြီး ရုပ်လုံးပေါ်အောင်၊ အသက်ဝင်အောင်၊ခြေလှုပ် ပါးစပ်လှုပ်ခတ်အောင် လုပ်နေတာမျိုးကို ပြည်သူမကြိုက်ရင်၊ပြည်သူလက်မခံရင်၊ ပြည်သူငြင်းပယ်ရင်၊ ပြည်သူဖျက်သိမ်းချင်ရင်၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံကြီးကို ပြင်ပြောင်းအောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဘဲရှိတယ်။
ကျုပ်ယူဆချက်အရ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဒီလိုမြင်တယ်ဗျာ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ မတရားတဲ့ဥပဒေမစိုးမိုးရေးဘဲဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးခြောက်ပြစ်ကင်း အခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။
အဲဒီအခြေခံဥပဒေကြီးထဲမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကင်ဆာရောဂါမြစ်ပွားကလာပ်စည်းတွေ တွယ်နေတုန်းဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ် အဆုတ်ရောဂါပိုးတွေ တန်းလန်းရှင်နေတုန်းဖြစ်တယ်။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ၊ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ခေါစာကျွေးမယ့် လူမှုကိုယ်ခံအားနည်း အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဇစ်မြစ်တွေ စွဲကပ်နေတုန်းဖြစ်တယ်။
Credit: Ko Tun Wai and TQ KO Zaw Win
Posted: 15 Oct 2012 11:57 PM PDT
Posted: 15 Oct 2012 11:40 PM PDT
Lim Kit Siang had recently asked United Nations secretary-general Ban Kim Moon to makeaclear stand on efforts undertaken by Malaysia to combat corruption.
The sec-gen's official Dmitri Vlassis, head of the UN;s Corruption and Economic Crime Branch of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) had commended Malaysia for taking serious efforts at tackling corruption.
He also dismissed the annual Corruption Perception Index prepared by Transparency International as outdated and counter-productive.
SayingaUnited Nations official's recent praise of the Malaysian government's anti-graft efforts has "horrified" local anti-corruption campaigners, DAP advisor Lim Kit Siang called on UN secretary-general Ban Ki-Moon to state whether it reflected the world body's official stand.
Lim was referring to remarks by Dmitri Vlassis, head of the UN's Corruption and Economic Crime Branch of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), who commended the Malaysian government for its "serious efforts" at tackling corruption while at the same time dismissed the annual Corruption Perception Index prepared by Transparency International as "outdated" and "counter-productive".
Vlassis's remarks were made during the recently concluded annual conference of the International Association of Anti-Corruption Authorities in Kuala Lumpur.
"Anti-corruption activists and campaigners in Malaysia want to know why Vlassis is condoning or seeking to 'cover up' the failures of the government's anti-corruption campaign in Malaysia, in particular in the past 42 months of Najib premiership despite the fanfare about the Government Transformation Programme and NKRA on fighting corruption," said Lim inastatement.
Lim was not pleased with suchacommendable remark by Vlassis. To Lim, Malaysia should be condemned as the most corrupt nation in the world.
Who does he think he is? Making such calls to the UN sec-gen didn't make himasensible man. He didn't see and recognise the government's effort in fighting graft although he himself is aware that corruption is not easy to contain.
Corruption is like prostitution, Lim! Why didn't you make any call to Selangor, Penang and Kelantan, and the Federal to combat vise activities as well, instead of showing so much interest in corruption when the government, via the MACC is going all out to control it?
Or maybe you want the UN official to spare Pakatan Rakyat that complimentary remarks when you guys take over Putrajaya in the next general election?
ဦးသိန်းစိန်တို့ ပြုံးပြုံးကြီး အမြတ်ထုတ် စတန့်လုပ်နေပုံများ …
လူထုမကြိုက်မယ့် (ဆန္ဒပြလာရင်လည်း အစိုးရကို မထိခိုက်လောက်တဲ့) အလုပ်မျိုးကို ရွေးလုပ်၊ အရိုးခံလူထုက ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်တော့ လူထုစကား နားထောင်တဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ လူထုမကြိုက်တာ မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီး OIC ကိစ္စကို ခုတုံးလုပ်၊ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အမြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့ အခုလောက်ဆို ကွယ်ရာမှာ ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်နေပြန်ဦးမှာပေါ့လေလို့ တွေးနေမိရဲ့။တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတာက ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ လူထုကို လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ အမြင်ရောက်စေတဲ့ အမြတ်တခုရပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ အရိုးခံလူထုရဲ့ အမြင်မှာတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ငါတို့စကား နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်ပေးမှု နောက်အမြတ်တခုကို ရလိုက်တာပဲပေါ့။ ဟဲ ဟဲ … ပြောရရင် ဦးသိန်းစိန်တို့ ၂၀၁၅ အတွက်များ ကြိုမဲဆွယ်နေသလားပေါ့လေ။ အမြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရသူတွေကတော့ အရှိန်တက်နေဆဲမို့ အခုအထိ ခံလို့ခံရမှန်း သိချင်မှ သိကြပေဦးမယ်။
သွေးအေးသွားတဲ့အခါ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စေချင်တာက ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်းတိုင်ထွန်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ၊ ကိုင်းတန်းဈေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ၊ လက်ပံတောင်းတောင်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေတုန်းကကျတော့ အစိုးရက အခုလို တရားဝင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲ ခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မေ့လောက်ပြီဆိုမှ ဘာလို့ တရားစွဲတာလဲ ဆိုတာကိုပါ (စေ့စေ့တွေး ရေးရေးတော့ပေါ်မှာပါလေ)။
အရင်တခါကလည်း ၀န်ကြီးများရုံးကို ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အတွက် ငှားရမ်းမယ်ဆိုတဲ့ အသံလွှင့်လိုက်ပြီး ပြည်သူက ဆန္ဒတောင်မထုတ်ဖော်ရသေးခင် ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်တဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီအစီအစဉ်ကို မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီး မဟောက်ခင်က ကြောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးကို ဖန်တီးခဲ့ဖူးသေးတယ်။
ဦးသိန်းစိန်တို့ အဲဒီလို ကလေးကွက်နဲ့ အမြတ်ထုတ်နေပုံကို ကြည့်ပြီး စာရေးဆရာ မောင်သာချို ပြောပြဖူးတဲ့ သူ့မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာဇနီးမောင်နှံရဲ့ ဖြစ်အင်ကို သွားသတိရမိတယ်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံက ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် တက်ညီလက်ညီ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရင်း အေးအေးလူလူ နေထိုင်ကြသတဲ့။ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုသလို ရန်တွေဘာတွေ ဖြစ်တာမျိုးလည်း တခါမှမရှိဘူးတဲ့။ ကြာတော့ ဒါကို ယောက်ျားလုပ်တဲ့ ကဗျာဆရာက ပျင်းသလိုလို ခံစားလာရသတဲ့။
အဲဒါနဲ့ တနေ့မှာ သူ့မိန်းမကို စိတ်ဆိုးအောင် တမင်လုပ်ပြီး စိတ်ဆိုးမှ ပြန်ချော့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ အရက်လုံးဝမသောက်တတ်တဲ့ ကဗျာဆရာဟာ အပြင်ကနေ အာဆွတ်ရုံ၊ အနံ့ထွက်ရုံ အရက်နည်းနည်းလေး သောက်လာသတဲ့။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ လွယ်အိတ်ကို ပစ်ချပြီး သူ့မိန်းမနားကို သွားကပ်ထိုင်သတဲ့။ သူ ကပ်ထိုင်ပေမယ့် မိန်းမလုပ်သူက စာဖတ်တောင်မပျက်ဘူးတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ကဗျာဆရာက ကြံရာမရဖြစ်ပြီး "မိန်းမရေ မိန်းမ … မင်း ဒီနေ့ ကိုယ့်ဆီက ဘာအနံ့မှ မရဘူးလားကွာ" လို့ မအောင့်နိုင်မအီးနိုင် မေးလိုက်သတဲ့။ အဲဒီအခါမှာ ကဗျာဆရာ့မိန်းမက "အရက်နံ့ ရသားပဲ၊ အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ" လို့ စာဖတ်မပျက် အေးတိအေးစက် ပြန်ပြောသတဲ့။
အဲဒီမှာတင် မိန်းမကို အရမ်းချော့ချင်နေတဲ့ ကဗျာဆရာက "မိန်းမရယ် ကိုယ် အရက်သောက်လာတာကို မင်းမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လား၊ မကြိုက်ရင် နောက် ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မသောက်တော့ပါဘူးကွာ၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့၊ ကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အဲသလို စကားမပြောဘဲတော့ မနေပါနဲ့" လို့ ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ မိန်းမကို ချော့ဖို့ ဖက်မယ်အလုပ်မှာ မိန်းမက သူ့ကို ကပျာကယာ တွန်းထုတ်လိုက်ပြီး "ဖယ်စမ်းပါ၊ တော် ဘာတွေ အရူးထနေတာလဲ၊ ဘာကို စိတ်ဆိုးရမှာလဲ၊ ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းကောင်းနေရတဲ့အထဲ၊ သွား သွား ရေသွားချိုးချေ။ ပြီးရင် ထမင်းစားကြမယ်" လို့ စာဆက်ဖတ်နေရင်း ပြန်ပြောလိုက်ပုံကြောင့် ချော့ချင်လွန်းတဲ့ ကဗျာဆရာ ဘယ်လိုချော့ရမှန်း မသိတော့ဘဲ ခေါင်းလေးကုတ်ပြီးသကာလ ရေချိုးဖို့ ထွက်ခဲ့ရသတဲ့။
အခုလည်း ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ကြောင်း အမှတ်ယူချင်လွန်းနေတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အင်ထုနေပုံတွေက အထက်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ့အထာလို ရယ်စရာပါပဲ။ သူ့ဘာသာသူ အကွက်ဆင် လုပ်ဇာတ်ထွင်ပြီး "ကိုယ် နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးကွာ" လို့ ပြည်သူကို ဇွတ်အတင်းကြီး ချော့နေသလို …။
အင်း … ကဗျာဆရာ့မိန်းမက စိတ်မဆိုးတတ်ပေမယ့် တချီချီမှာ အမှန်တကယ် ရေမရောစတမ်း စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဖနောင့်နဲ့ တင်ပါး တသားတည်းဖြစ်အောင် ပြေးနေရမှဖြင့် စိတ်မကောင်းစရာများ ဖြစ်နေမလားပဲနော်။
TQ Jagara BaBa for the link
Posted: 16 Oct 2012 12:33 AM PDT
Posted: 15 Oct 2012 10:08 PM PDT
The judge going through the documents then look up and said to the old lady, "I'm sorry but I cannot make any exception to the law and you must be punished." The old lady was fined Rp. 1 million (USD 100) and if she could not pay the fine then she will be jailed for2andahalf years as demanded by the law. She wept as she could not pay the fine.
The judge then took off his hat and put in Rp. 1 million into the hat and said, "In the name of justice, I fined all who are in the court Rp. 50 thousand (USD 5.50) as dwellers of this city and lettingachild to starve
until her grandmother have to steal to feed her grandchild. The registrar will now collect the fines from all the accused."
Posted: 15 Oct 2012 10:59 PM PDT
Also, introducing Hannan's blog..thank you.
Posted: 15 Oct 2012 08:45 PM PDT
Tekan Computer ( Double Click ).
Mine is Nikon brand so I tekan 104 NCD 40.
Scroll down for new/latest photos.
See whether those are the required photos ( Double Click )
Write down the number of the chosen photos..eg DSC 0410, DSC 0409, DSC 0402, DSC 0401, DSC 0400 etc etc. Close by clicking x.
Click once only on the first picture..eg DSC 0410.
Then, click Control to start selecting 2nd picture which is DSC 0409. Remember to Ctrl & click at the same time.Keep on using Ctrl & click to select pictures chosen.
Click on Organize and Copy ( Click once ).
Put into the location/destination. Normally in My Picture. Click once on the left ( Pictures ).
Tekan once on New Folder.
Delete by pressing backspace & the type the name. If you want to rename the folder, right click once on the folder.
Double click on the folder with the new pictures that are wanted.
Click once on Organize and Paste.
Filter again.. Double click 1 picture only to view. And then, write down those yang tak nak upload.. Then Close ( x ).
Select and Delete ( Same Technique ). First picture; Click once. 2nd picture onwards Cntrl & Click. Go to Organize ( Click once ) Delete. Tekan Yes. Minimize.
Open the blog. Click New Post. Click once on Insert Image. Click once on Choose Files.
Click once on the left ( Pictures ).
Go to your Folder just now..double click.
To select all pictures, tekan Ctrl & letter A (together)
If Ctrl+ A tak berjaya,press once on Organise and press once Select All. Baru Open (1 click)
To choose which picture comes first, click once on the picture. Click once on Add Selected.Choose Small, Medium, Large. Upload.
Posted: 15 Oct 2012 07:34 PM PDT
"Projek tidak dirancang dengan teliti. Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan bagi projek yang komponen utamanya gagal dalam pengujian dan pentauliahan," jelas laporan berkenaan.
Posted: 15 Oct 2012 07:17 PM PDT